Ukuphupha ileli Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ubuninzi bemisebenzi ngeyayingenakwenzeka ukuba umntu ebengenzanga isixhobo esinamanyathelo onokunyuka usenyuka nawo: ileli. Abapeyinti, abasebenza ngombane, kunye nophahla bafuna iileli zokufikelela eluphahleni kunye nophahla. Abacimi mlilo basindisa ubomi ngamanqanaba abo amade arhoxa kakhulu kwaye ajikelezayo. Kodwa isixhobo sokunyuka sikwasebenza kumakhaya abucala okanye egadini: xa kucocwa iifestile okanye kukhiwa iiapile, ngoncedo lweleli yeziqhamo.
Ileli inokwenziwa ngomthi, iplastiki, okanye ngealuminiyam, kwaye iyafumaneka njengesinyuko, inyathelo lokunyuka, ileli ethambekileyo, kunye nolunye uyilo olwahlukeneyo. KwiTestamente eNdala kukho intetho ngezinyuko eziya ezulwini, ekunyukela kuzo iingelosi. Ungalinyusa ileli yomsebenzi ukuba unamabhongo kwaye usebenza nzima.
Ukuba umntu uphupha ngeleli, ngokuqinisekileyo umbuzo uyamngena, ukhokelela phi? Mhlawumbi unomdla, mhlawumbi ukuphakama kunye nokungaziwayo kukoyikisa nawe. Nokuba ileli iyabonwa okanye iyathwalwa, ikhwele okanye iwe, zonke ezi zinto zidlala indima ebalulekileyo ekutolikeni amaphupha.
1 Uphawu lwephupha «ileli» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ileli» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ileli» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ileli» - ukutolikwa ngokubanzi
Ileli imele utshintsho kubomi bamaphupha njengophawu lwephupha. Ekuchazeni amaphupha, ukunyuka kwileli kunxulunyaniswa nethuba elifanelekileyo lokutshintsha imeko yangoku ibengcono.
Ukusuka kumqolo ukuya kumqolo, iphupha lihamba kancinci kodwa ngokuthe chu ukuya kwinjongo yalo. Iphupha elinje lihlala livela xa umntu ejonga utshintsho lomsebenzi okanye xa ikhondo sele likhomba kwicala elitsha. Isimboli yamaphupha ikwisicatshulwa sephupha esibonisa ngokucacileyo ukuba iphupha elo likulungele kwaye liyakwazi ukunyusa ileli yomsebenzi.
Ubunzima bulindelwe ukuba iirungs ezibonwe ephupheni zaphukile. Ukuba uphawu lwephupha aluzinzanga okanye lonakele, oku kuchazwa kulo. Ukungathandeki imeko. Kusenokwenzeka ukuba iphupha lenzakalisiwe. Ukuba ileli ikhokelwa kukuphupha ngokwakhe, oku kufanekisela ukutolikwa kwephupha ngamandla akhe okunceda yena nabanye.
Ukuba omnye umntu ophuma kumsitho wephupha usebenzisa ileli, oku kutolikwa kutoliko lamaphupha njengophawu lokuba umntu ubaluleke kakhulu kumaphupha kwizicwangciso zomsebenzi wakhe. Olunye utoliko luthi abanye banokuqhubela phambili kwaye bathathe umngcipheko.
Ukuhla ngeleli kukuchazwa kwamaphupha njenge isilumkiso ukuqonda ngokuchasene nelahleko kunye nengozi, kunye nokulahleka kwegama. Ukuba ufumana ukuwa kwileli ephupheni, uphawu lwephupha sisikhumbuzo, ngawo onke amabhongo. mantlaSukungakhathali kwaye ujonge ngononophelo kwinkampani nganye.
Ukuba iphupha libona abanye bewa elelini, abantu othembele kubo ngamandla banokukushiya enkathazweni. Uphawu lwephupha luthembisa ukoyisa iingozi ukuba umntu uphupha ukuba ubaleka ejele ngoncedo lweleli.
Uphawu lwephupha «ileli» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, uphawu lwephupha "ileli" lubonisa ukungazinzi kunye nokungaqiniseki okucacileyo ekutolikeni amaphupha. Khwela kuyo. Inganyuka, kodwa iphinde ibuye nanini na. Iphupha lisebenza ngendlela enzima inyathelo ngenyathelo. Mhlawumbi ungazi kakuhle ubunzima bempilo yakho kwaye iphupha liyimemo kwisazela sakho ukutshintsha le meko.
Umngcipheko oqhubekayo wokutyibilika kunye nokuwa, ubonakalisa ukutolikwa kwephupha kukungaqiniseki okusoloko kukho apho umphuphi acinga khona. i YintlunguUkuntywila enzonzobileni kunokuba ngumthwalo ngokwengqondo kangangokuba ukuphupha kufuna uncedo kunyango.
Uphawu lwephupha «ileli» - ukutolika kokomoya
Kutoliko lwamaphupha, uphawu lwephupha "ileli" limela amandla ephupha, elinye Inqanaba lokuqonda ukufikelela. Kwiphupha ushiya ngasemva el mundo eziphathekayo kwaye zifikelela ngokomoya. Amanyathelo asixhenxe okanye alishumi elinambini, ahlala eneleli ephupheni, abonisa amanqanaba okuphuhla ukuya ngokomoya.
Endleleni eya ezulwini, ukuthobeka ngumgangatho okhokelela ekuphupheni phezulu, ukuzingca kuyakudanisa.